KeyLogger အကြောင်းတစေ့တစောင်း + Keylogger Tools Download | Myanmar Black Hacking
9 KeyLogger အကြောင်းတစေ့တစောင်း + Keylogger Tools Download
IT ခတ်ကြီးထဲမှာ KeyLogger အကြောင်း မသိမဖြစ် ဆိုသလောက်ကို အရေးပါလာခဲ့ပါပြီ။ KeyLogger အကြောင်းကို မသိရင် ခတ်မမှီသလို မိမိ Gmail အကောင့် Facebook အကောင့် နှင့် မိမိပိုင်ဆိုင်သော အကောင့်များစွာသည် Hacking လုပ်သူတို့၏ လက်ထဲသို့ ရောက်ရှီပြီး အကောင့်များဆုံးရှုံးပျောက်ကွယ်ရန် 90% လောက်သေချာနေပါပြီ။ သိတဲ့သူတွေ ရှိသလို မသိတဲ့သူတွေလဲရှိဦးမည်။ သိသလိုလို မသိသလိုလို ဇဝေဇဝါ ဖြစ်ကြသော သူများလဲ တိတိကြကြမဟုတ်တာတောင် အနီးဆုံး အခြေအနေအထိ သိရှီနားလည်ပြီး ဗဟုသုတ ရစေရန်မျှဝေလိုက်ပါသည်...
Internet café ဆိုင်တွေမှာ သုံးသူများ အတွက် (သို့) သူများ PC မှာ သုံးတဲ့သူတွေ အတွက်ပါ။ သူများ ပတ်စ်ဝေါ့ယူမယ်၊ Gmail password hack မယ်ဆိုရင် connection ကျအောင်လုပ် gtalk က password တွေ အဖြစ်ပေါ်လာရင် သူတို့ပြောတဲ့ Software နဲ့ ကြည့်ပေါ့ဗျာ။ အင်း ... အဲဒီထက် ကောင်းတဲ့ နည်းရှိတယ်ဗျ ... see password လို့ ခေါ်တယ်။ သူ့ပရိုဂရမ်က မှန်လို ပုံစံလေးပါတယ်။ password နေရာမှာ မှန်ဘီလူးလို ကြည့်လိုက်ရင် ပေါ်ပြီပဲ။ portable လည်း ရှိပါတယ်။ ကဲ... ဆက်လေ့လာရအောင်.... အဲဒါထက်ဆိုးတာ တခုရှိတယ်ဗျ။ ဒီလိုဗျာ .. keylogger လို့ခေါ်တယ် .. Window စတက် ကတည်းက စအလုပ်လုပ်တယ်။ ပိတ်လိုက်လည်း နောက်ကွယ်မှာ လုပ်နေတယ်။ tray icon လည်း မပေါ်ဘူး။ ရှိမရှိ မသိရဘူးပေါ့ဗျာ။ သူက ခင်ဗျား keyboard မှာ ရေးလိုက်သမျှ၊ mouse နဲ့နှိပ်သမျှတွေကို အချိန်နဲ့တကွ မှတ်ထားပေးတယ်ဗျ။ အဲဒါဆို ဘာတွေ ပါသွားမလဲ တွေးကြည့်လေ။ ပထမဆုံး gtalk sign in ၀င်မယ်ဗျာ။ သွားပြီ user name ရော ၊ password ရော။ နောက်ပြီးရင် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ နှစ်ကိုယ်ကြားတွေ ပြောမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းပိုင်းတွေ ပြောမယ်။ တချို့တွေ credit card နံပါတ်တွေ ရိုက်မယ် အကုန်ကျန်ခဲ့တာဗျ။ ဘယ်လောက် ဆိုးသွားနိုင်မလဲ တွေးကြည့်ပေါ့။ အထူးသဖြင့် ဆိုင်ဘာကနေ သုံးရတဲ့လူတွေ။ တွေးသာကြည့်ပါတော့ဗျာ ... (All in 1 key-logger ဆိုရင် ဓါတ်ပုံတွေ၊ အသံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကိုပါ မှတ်ပေးထားနိုင်တယ်၊ သတိထားနော်..
KeyLogger ဆိုတာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာ မိမိလုပ်ဆောင်ခဲ့သော လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းကို မှတ်သားထားပေးပြီး KeyLogger ပိုင်ရှင်ဆီသို့ အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးသော ကြားခံ Hacking tool တစ်ခုလို့ယူဆလို့ရပါတယ် … (ဥပမာ – Me And You ပေါ့ဗျာ၊ Me နဲ့ You ကတော့ လူတိုင်းသိမှာပါ။ ကြားက And ဆိုတာလေးကတော့ KeyLogger လေးပေါ့ဗျာ၊ Me က KeyLogger Owner ဆိုရင် You ဆီက အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုယူ ပြီး Me စီသို့ ပို့ဆောင်ပေးမယ် တစ်ကယ်လို့သာ You က KeyLogger Owner ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ Me ဆီက အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုယူပြီး You ဆီပြန်ပို့မယ်ပေါ့ဗျာ၊ ရှုပ်သွား ပြီလား) အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်ဗျာ … J
KeyLogger အမျိုးအစား ၃ မျိုးရှီပါတယ်။ Software KeyLogger, Hardware KeyLogger, Add-on KeyLogger တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Hardware KeyLogger အကြောင်းလေးနဲနဲပြောပြချင်ပါတယ်ခဗျာ … Hardware KeyLogger ကိုရှာဖွေရန် အလွန်လွယ်ကူပါတယ် … Computer ရဲ့ Motherboard နှင့် Keyboard ကြိုးကို ဆက်သွယ်ထားသောနေရာမှ လွယ်ကူစွာတွေ့ရှီနိုင်ပါသည်။
Hardware KeyLogger ကို ပုံတွင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းတပ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။ Hardware KeyLogger ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကတော့ ကျနော်တို့ Computer အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ Keyboard မှရိုက်လိုက်တဲ့ စာတွေအားလုံးကို Monitor မှာမဖော်ပြခင် ကြားကဖြတ်ယူမှတ်သားတဲ့အလုပ် ကိုလုပ်ပေးပါသည်။ Temporary Save ပေးထားတဲ့ပေါ့ဗျာ … နောက်မှ KeyLogger Owner ဆီပို့ပေးတယ်ပေါ့။
ထို့ကြောင့် မိမိ Computer, Laptop မဟုတ်ပဲ အခြားကွန်ပျူတာများ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက သေချာစွာစစ်ဆေးပြီးမှအဆုံးပြုသင့်ပါသည်။ Hardware KeyLogger တစ်ခု မိမိသုံးမည့် ကွန်ပျူတာတွင် ရှီသည်ဟုယူဆလျှင် KeyLogger ကိုလွတ်အောင် ရှောင်ပြီးအသုံးပြုတဲ့နည်းလေးမရှီဘူးလားဟု မေးလျှင် ကျနော့် ပြန်ဖြေဖို့အဖြေရှီပြီးသားပါ …
Keyboard အသုံးပြုလျှင် KeyLogger ကမှတ်မည်ဖြစ်သဖြင့် Mouse တော့ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် စာရိုက်ဖို့အတွက် မိမိ အသုံးပြုမည့် ကွန်ပျူတာမှ Keyboard ကိုမသုံးပဲ Monitor ပေါ်မှာ Keyboard အသစ်တစ်ခုပေါ်ပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
Windows Xp အတွက်
Mouse ဖြင့် Star Menu > All Program > Accessories > Accessibility > On Screen-keyboard
Windows 7, Vista အတွက်
Mouse ဖြင့် Star Menu > All Program > Accessories > Ease of Access > On-Screen Keyboard ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး Keyboard အသစ်ခေါ်ယူပြီး စာရိုက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထို Keyboard မှ ရိုက်သော စာလုံးများအား Hardware KeyLogger မှ မှတ်သားပေးနိုင်ခြင်းမရှီသည့်အတွက် On-Screen Keyboard သုံးပြီးစာရိုက်ခြင်းကို စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Software KeyLogger ကတော့ Gtalk တို့ skype တို့ကို Download ဆွဲပြီး ကွန်ပြူတာမှာ install ပြန်လုပ်ပြီးသုံးရတဲ့ exe file အမျိုးအစားပါ။ Software KeyLogger ကြတော့ Hardware KeyLogger လို Keyboard မှ စာရိုက်ခြင်းကို မှတ်သားပေးတော့တာမဟုတ်ပဲ Online အင်တာနက်ပေါ်မှ မီမီသွားသမျှ လမ်းကြောင်းတိုင်းကို (က ကြီးကစ- အ အဆုံး) မှတ်သားပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့တချို့သော Software KeyLogger တွေဆိုရင် Screen Shot ပါရိုက်ပေးထားပြီး Software KeyLogger Owner ဆိုသို့ပို့ဆောင်တဲ့အထိအဆင်မြင့်ကြပါတယ်။ Software KeyLogger သည် Spy Software ဖြစ်သည့်အတွက် ရှာဖွေသိရှီရန် အလွန်ခတ်ခဲလှပါတယ်။
ဥပမာ – Hacker တစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ KeyLogger Software ကို ကွန်ပြူတာမှာ ကျနော်တို့အသုံးပြုများတဲ့ Software အနေနဲ့ သာ နာမည်ပေး icon ပြောင်းပေးထားရင် ရိုးရိုး Program တစ်ခုအနေနှင့်သာရှီနေပြီး သိရှီရန်ခတ်ခဲလှပါတယ် … ကွန်ပျူတာမှ Task Manager ခေါ်ပြီးကြည့်ရင်တောင် KeyLogger အနေနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးခဗျာ …
ထို့ကြောင့် Software များအား ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီး အလျှင်စလို အသုံးမပြုမီစေရန် သတိပေးအပ်ပါသည်။ တကယ်လို့အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင်လဲ မိမိ Download လုပ်ပြီးရလာတဲ့ Folder ထဲမှာ logger.bat file ပါမပါ သေချာစစ်ဆေးပါ။ တစ်ကယ်လို့မပါလျှင်လဲ ဝမ်းသာအားရအသုံးမပြုပါနှင့် တခြားအချက်အလက်တွေ စစ်ရန်ရှီပါသေးသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲ့ .bat file ကို exe file အဖြစ်ပြောင်းလဲလို့ရသည့်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းလိုက်စစ်မယ်ဆို အများကြီးလိုက်စစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ပြောလဲပြီးတော့မှမဟုတ်လို့ Software KeyLogger ရန်မှကင်းဝေးရန် Anti-virus Software များကိုသာ install လုပ်ပြီး အသုံးပြုပါတော့ခဗျာ … Kaspersky, Syamantic, AVG အစရှီသဖြင့်ပေါ့ဗျာ …
နောက်ဆုံးပြောဖို့ကျန်တာကတော့ Add-on KeyLogger ပါ။ ကွန်ပျူတာ မှ Browser တွေမှာ Add-on Plug-in တွေအသုံးများသလို Software တွေ install လုပ်တဲ့အချိန်မှာ တောင်းဆိုပြီး install လုပ်ခိုင်းတာများပါတယ်။ မိမိက install ပြုလုပ်လိုက်မီပြီဆိုပါက မိမိအကောင့်ဝင်တဲ့အချိန်ကြရင် Username, Password တွေအားလုံးကို Hacker တွေဆီပေးပို့ပေးခြင်း အလုပ်ကို Add-on KeyLogger ကလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ Hacker အများစုဟာ အကောင့်တစ်ခုကို Hack တော့မယ်ဆိုရင် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်နေပါစေ အသုံးပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Add-on ပြုလုပ်ခြင်းကိုလဲ သတိထားဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ကာကွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Add-on Keylogger တွေကို kill ပေးမဲ့ Add-on Keylogger remover tool တွေကို install လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
Keylogger Tools Download Release
Award Keylogger Pro 3.1 Full Activation 3.8MB<- Download ယူရန် Link - 1
Award Keylogger Pro 3.1 Full Activation 3.8MB<- Download ယူရန် Link - 2
မရိုးနိုင်တဲ့ USB thief Package လေးပါ။အစုံ ပါ ပါတယ်။အောက်ပါ password တွေကိုခိုးလို့ရတယ်။
ကိုယ့်အရင်ထိုင်သုံးသွားတဲ့ password တွေကိုပေါ့။ဒီလောက်တော့သိမှာပါ။
and Dialup/Wireless Network.
Polymorphic Keylogger FUD
ကျွန်တော်ထောက်ခံချက်ပေးမယ့် Keylogger ဆိုရင်ဒါလေးကိုပေးရပါလိမ့်မယ်။ သံုးရတာတော့ အနည်းငယ်ရှုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာလဲ function စုံလင်လို့ပါ။ သူ့မှာ build in binder ပါဝင်ပါတယ် email sever ပေးပြီးလဲသုံးလို့ရပါတယ်။အောက်ပါလင့်ကနေဒေါင်းလိုက်ပါ။
ဒီလောက် သိထားရင် အတော်အသင့် နားလည်သဘောပေါက်နေပြီဟုဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုသူများအားလုံး ဗဟုသုတ ရကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် …
Sharing – From Google ( Knowlwdge အတွက်အကြောင့် ရောသမမွှေလိုက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆိုင်ရာပိုင်ရာများကို credit ပေးပါတယ် ...
Nov 22, 2015, 7:47:00 PM
အခုလို ပညာဒါနဝေမျှသော ဆိုဒ်Adminများ ကျန်းမာပါစေဗျာ။ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
Dec 11, 2015, 9:35:00 AM
keylogger အသုံးပြုနည်း pdf တင်​​ပေးပါလား bro
Apr 21, 2016, 6:12:00 AM
အကို ညီဖုန်းနဲ့ပတ်​သက်​တဲ ဟက်​ကင်း​တွေကိုလိုချင်​လို့ပါ
May 7, 2016, 10:45:00 AM
Jul 13, 2016, 11:30:00 AM
Thankalot elderbro...
Aug 30, 2016, 8:47:00 PM
Sep 16, 2016, 11:48:00 AM
Jun 8, 2018, 4:17:00 AM